Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Tsy ho latsa-danja anie ny orinasa malagasy
Isan’ny niteraka fanamarihana tamin’iny faramparan’ny herinandro lasa iny ny nahatongavan’ny filohampirenena Andry Rajoelina nitokana ny fotodrafitrasa fanitarana ny orin’asa Star tany Antsirabe sy ny lalana mirefy 2, 8 Km mampifandray ny orin’asa Star amin’ny lalampirenena fahafito. Niteraka fanamarihana satria raha ny lanjan’izany filohampirenena izany no jerena dia toa bitika ihany ireo zavatra notokanany ireo, indrindra fa vahiny frantsay no tompony fa tsy Malagasy. Ny filoha moa dia nanamarika fa “orinasa mamorona asa ho an’ny tanora ny Star”. Hatreto dia 386 ny asa mivantana entin’ny Star, ary ireo tantsaha izay mamatsy ny akora fototra ho an’ny Star (malte, orge, katsaka) dia hoe mahatratra 1.500.
Raha ampitahaina amin’ny firenena Malagasy sy ny tanjany ara-toekarena ankehitriny aloha dia tsy ratsy ireo tarehi-marika ireo fa raha ampitahaina amin’ny fenitra tokony ho izy, indrindra fa orin’asa maro-rantsana eo amin’ny sehatra iraisampirenena ny Star, dia bitika ihany koa.
Ny mpanao fanamarihana dia somary nanindry fa “mahazo vahana amin’ny fitondram-panjakana mihitsy raha vao ny vahiny no mihetsika”. Sanatriavin’ny vava ve, hoy ny mpitazana, ka matahotra ny hilaozan’ny vahiny eto isika ka ho voa mafy? Misy koa ny manoritra fa mihazakazaka manao dokam-barotra ankolaka ny orinasan’ny vahiny ny filoha, toy ny nanatrehany ny fitokanana ny fisokafan’ny toeram-pisakafoana an’ny vahiny tetsy Ankorondrano, roa taona lasa izay, dia ny “Kfc”.
Misy koa anefa ireo mpanara-maso no nanipika fa “tsy heloka eo anatrehan’ny lalàna velona ny fanatrehan’ny filohampirenena manome voninahitra lanonam-pitokanana an’ny sehatra tsy miankina, toa izao tao amin’ny Star Antsirabe izao”. Tao ny nampivoitra fa “teboka iray azo ambara fa fanoitran’ny fampiroboroboana ny orin’asa mijoro ny fanotronan’ny filohampirenena ny lanonam-pitokanana toa ireny, ary singa iray manentana ny orin’asa hafa hanao tsaratsara kokoa noho ny Star. Ny tavan-drahalahy mantsy mandranitra ny tavan-drahalahy, hoy ny fitenenana.
Tsy vitsy koa anefa ireo nilaza fa “rehefa nanome voninahitra ny orin’asan’ny mpandraharaha vahiny toa ireny ihany ny filohampirenena dia rariny sy hitsiny raha tsy mikely soroka koa izy amin’ny fanotronana sy fanomezana vahana ary fanampiana mihitsy ny orin’asa an’ny mpandraharaha Malagasy.
Ny mampalahelo anefa dia asa raha hisy mpandraharaha Malagasy mba ho afaka hanangana orin’asa ka hampiasa olona an-jatony tao izao. Raha misy tan-tsoroka avy amin’ny fanjakana amin’ny lalan’ny loharanom-bola avy amin’ny harem-pirenena voajanahary eto koa anefa dia mety ho azon’ny mpandraharaha Malagasy mihitsy ny mivelatra noho ny vahiny eto.
Ny dikan’izany rehetra izany dia iantsorohana andraikitra sy adidy ny fitondram-panjakana hanome vahana kokoa ny mpandraharaha Malagasy, na orin’asa fanaovan-traozavatra (indostria) hatsangany na orin’asam-barotra, indrindra fa orin’asam-pambolena sy fiompiana, ankoatry ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany.